Niova ny kalitaon’ny lakrimozenina satria nahery vaika kokoa raha oharina tamin’ny fampiasa hatramin’izay. Manamboninahitra efa tsy eo amin’ny fibaikoana ny mpitandro ny filaminana fa fanta-daza amin’ny fandravana hetsi-bahoaka no voalaza ho nisodisody teny Analakely sy voatonona ho nanome toromarika, hoy ny mpitarika ny hetsika. Zavatra nampiahiahy ihany koa ny fahitana teratany vahiny, toa tsikaritra ho mitsikilo na mety manome toromarika mihitsy aza teny an-toerana. Tamin’ny 12 ora sasany teo moa no nanomboka ny fanapariahana sy ny fanenjehana rehefa nisy vitsivitsy tsy nahazaka ny fanosehana niteraka fianjeran’ny olona, ka namaly toraka, saingy nohararaotina satria ny vahoakan’Analakely manontolo no nosemporina ary latsa-dranomason’ny lakrimozenina. Am-polony no naratra, ary am-polony mahery koa ny voasambotra, raha ny fikaroham-baovao, fa 4 kosa sisa no tavela hiakatra fampanoavana anio 7 janoary. Ny marina marina ihany, ary izay no takiana eny an-kianjan’ny 13 mey manoloana ny hosoka sy halatra bevava tamin’ny fifidianana. Efa tsara petrapetraka moa ny hala-bato sy ny hosoka, ka amin’izao fotoana izao dia birao fandatsaham-bato 5.224 isa no tena ahitana halatra mibaribary sy hosoka ka vato 600 000 mahery no tsy ara-dalàna tamin’ireo ankoatra ireo hafa satria mahafaobe ny hosoka, raha ny fanadihadiana mivoaka. Maro no maneho ny tokony hanafoanana ny latsa-bato noho ny tsy fampiharana ny andininy faha-120 amin’ny lalàna fehizoro momba ny fifidianana, tokony hametrahana “numéro de series”, izay heverina ho nanamorana ny hosoka. Tsy tokony hanan-kery ireo bileta rehetra noho ny tsy fahafenoana ny fepetra, ka lasa vato maty avokoa raha ampiharina ny andininy faha-171 amin’io lalana io, hoy ny hafa. Niainga teny amin’ny Vaomiera mpikarakara ny fifidianana (CENI), dia efa natao izay tsy hisian’ny fampitahana ny vokatra ahitana ireo hosoka samihafa, ka navoaka haingana dia haingana ny vokatra tsy hitohizan’ny fikarohana ny marina. Manaporofo ireny fa misy marina ezahina sakanana hatramin’ny farany eto, ary ankehitriny dia basy aman-tafondro no hanerena ny Malagasy hanaiky ny tsy fahamarinana sy ny hosoka ary ny kolikoly.